Ivaluva zetanki zangaphantsi kolwandle zikwabizwa ngokuba ziipneumatic valves, i-pneumatic subsea valves, valves kaxakeka, kunye nezivalo zongxamiseko zokuvala. Ukusukela ukuba kukho iingozi ezininzi zokubaleka ngesantya esiphezulu kunye netonela zezithuthi zempahla eyingozi e-China e-2014, amasebe karhulumente afanelekileyo ayomelezile i-supervis ...
Yintoni ekufuneka ndiyithathele ingqalelo xa itraki yetrakhi ishushu?
ngomphathi ku 20-06-02
1. Phambi kokusebenza kwesikhephe, iprojekhthi yokulwa ukuphuphuma kufuneka isuswe. Emva kokuba umsebenzi we-steamer ugqityiwe kwaye itanki ipholile, iya kubuyiselwa kwindibano entsha. 2. Phambi kokusebenza kwesikhephe, iplagi enefusible emazantsi evaluva yolwandle kufuneka isuswe. Emva ...
Ngaba umphezulu wevalufa yentsimbi engenanto nawo umhlwa?
ngomphathi ku 20-05-02
Yintoni intsimbi engenasici? Ekuqondeni kwabantu abaninzi, "intsimbi engenasici" yintsimbi engazukurusa, kodwa abathengi abaninzi bavelisa amabala erusi xa kuvela amabala amdaka amdaka (amabala) kumphezulu wezivalo zentsimbi. Siyintoni isizathu? Ivalvu zentsimbi ezingenanto zinayo ...
Kufuneka ndenze ntoni xa umpu wokuzitywina ugcwalisa ngokwakho umpu?
Nokuba umpu wombane kwilori yezibaso unokuzitywina, kuxhomekeka ikakhulu ekubeni igumbi lokudibanisa lingenza vacuum ngokwaneleyo. Ke ngoko, xa umpu wokugcwalisa ungenako ukuzitywina, kufuneka usonjululwe ngokwezi zimvo zilandelayo: 1. Jonga ukuba itywina lidibeneyo ...